Kenya oo qoraal ay isugu ekaynayso mid u naxaysa shacabka Somalia soo saartay xilli muuqaallada ciidankii la qabtay lasoo bandhigay | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Kenya oo qoraal ay isugu ekaynayso mid u naxaysa shacabka Somalia soo...
Kenya oo qoraal ay isugu ekaynayso mid u naxaysa shacabka Somalia soo saartay xilli muuqaallada ciidankii la qabtay lasoo bandhigay
(Nairobi) 25 Jan 2021 – Kenya ayaa war kasoo saartay dagaalka magaalada Beled-Xaawo, jeer ay DF Somalia ay Kenya ku eedaysay inay soo direen ”jabhad hubaysan.”
WAD Kenya ayaa war rasmi ah oo ay soo saartay ku sheegtay inay qoraal wargelin ah u dirtay Guddoonka Midowga Afrika ku sheegtay ”inay aad uga walaacsan tahay” dagaalka saaka markale ka dhacay magaalada Beled Xaawo.
Kenya ayaa ku doodday in “dagaalku uu u dhaxeeyo ciidamada Dowladda Fedeeraalka Somalia iyo kuwa Maamulka Jubaland”, iyadoo farta ku goddey in dhibka dagaalku uu gaari doono dadka shacabka ah, taasoo keeni karta qaxooti hor leh oo Kenya soo gasha.
Dhanka kale, Kenya ayaa ka meermeertay inay ka hadasho eedda ka imanaysa dhanka DF Somalia, iyadoo la fahamsan yahay in Kenya ay saanad iyo saldhigba siiso ciidanka uu wato Cabdirashiid Janan.
Si kastaba waxaa baraha bulshada wareegaya muuqaallo muujinaya ciidamo la sheegay in laga qabto malliishiyaadka ay Kenya taageerayso.
Previous articleYaa u sabab ahaa inay Ciidanka Somalia u babac dhigaan weerarkii lagu soo qaaday Beled Xaawo?
Next articleUrurka Midowga Afrika oo soo saaray war ka duwan midkii ay Kenya doonaysey